စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းက ဦးနှောက်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်လဲ - Hello Sayarwon
စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းသည် အာရုံကြောဖွံဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြသာနာဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သတ်ခြင်းများကိုအနှောက်အယှက်ပေးသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများက ခြောက်လတွင်စတင်ပေါ်တတ်ပြီး နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွင် သိသာလာပြီး အရွယ်ရောက်ချိန်တွင်အနည်းငယ်ပြန်သက်သာသွားတတ်သည်။
စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းကိုလက္ခဏာတော်တော်များများဖြင့်ရှာဖွေသည်။ စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းနှင့် ဦးနှောက်ပုံမမှန်ခြင်းဆက်စက်မှုရှိပါသလား။ လေ့လာသူများက ဦးနှောက်ပုံသဏာန်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ရောဂါဟု နှစ်မျိုးရှိကြောင်းဆိုသည်။
ပုံရိပ်ဖော်ရောဂါအတည်ပြုကိရိယာများဥပမာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ဦးနှောက်အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း အန်အာအိုင် သို့မဟုတ် စီတီတို့အပေါ်မူတည်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များက အောက်ပါအချက်တို့ကိုပေးသည်။
ဦးနှောက်အရွယ်အစားပုံမှန်မဟုတ်သောကလေးများသည် နေ့မစေ့လမပြည့်သော်လည်း ပုံမှန်ဦးနှောက်အရွယ်အစားရှိသူထက် သုံးဆခန့်ဖြစ်တတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
စိတ်ခံစားချက်နှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ပေးသောဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းကိုထိပါကပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့စာရေးသူများက ထိုနေရာသည် ဦးနှောက်၏အတွင်းပိုင်း အာရုံကြောအစုနှစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်(အန်အာအိုင် လုပ်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်သည်)
စာရေးသူတော်တော်များများက အာရုံကြောဆက်စပ်ပေးသောအရာများ အဓိကအားဖြင့် ဆယ်ရိုတိုနင်( ဦးနှောက်အားသတင်းပို့ပေးသောပစ္စည်း) များခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ နောက်ဆုံးသတင်းထုတ်ချက်အရ ဦးနှောက်ဆဲလ်များ အားအင်မရှိခြင်း(မိုင်တိုကွန်ဒရီးရန်းမကောင်းခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲ-ဦးနှောက်၏အေတီပီ ) ကုန်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ယခုလောလောဆယ် ထိုလေ့လာချက်များအပေါ် တိရစ္ထာန်များအပေါ်ကုသခြင်းကကောင်းသောရလဒ်ကိုတွေ့ရသည်။
ထို အေပီတီ ဆက်စပ်အရာများက စိတ်ကွန်မြူးခြင်းလက္ခဏာများကို ဓါတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဖာန် အားစမ်းသက်ရာတွင် ရောဂါလက္ခဏာပြင်းမှပေးသည်တိုင်ပျောက်ကင်းစေကြောင်းတွေရသည်။်ထိုဆေးက ပုံမမှန်သော ပုံစံ ၁၇မျိုးကိုသက်သာစေသည်။ ဦးနှောက်ပုံမှန်အခြေအနေရောက်စေခြင်း၊ဆဲလ်တွင်းလှုံဆော်ပေးခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအပြုအမူများ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မိုင်တိုကွန်ထရီးရန်းအလုပ်လုပ်စေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်ထိုဆေးကိုလူတွင်အသုံးမပြုကြည့်ရသေးပါ။
ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးမှုနှင့်ဆိုင်သော ထိုအရာအများကိုလေ့လာပေးခဲ့သော လေ့လာသူနှင်သိပ္ပံပညာရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အရင်က ကလေးမမွေးမှီ ဦးနှောက်ကောတတ်တွင် ခေါက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာရှင်များက အချို့သောအပြင်ဆုံးအခေါက်သည် အချိန်ကြာသည်နှင့် တဖြည်းဖြည်းနှစ်ဝင်လာသည်ကိုတွေ့ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ပုံမှန်ကလေးတွင်ကော စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းရှိသောကလေးများတွင်ပါဖြစ်နိုင်သည်။
လေ့လာမှု၏ရလဒ်က ရောဂါကိုနှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ထဲက စတင်သိပြီး ရောဂါစီမံခန့်ခွဲခြင်းများစတင်လုပ်လာနိုင်မည်။ ထိုကြောင့် အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ကုထုံးကုရသည်လည်းလွယ်လာနိုင်သည်။ အစောပိုင်းတွင် စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းကို ရောဂါလက္ခဏာများ (ကလေးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကြည့်ခြင်း မိဘများအားမေးမြန်းခြင်း)ဖြင့်သာသိနိုငိသည်။
. Autism Speaks, Brain Study Finds Evidence that Autism Involves Too Many Synapses. https://www.autismspeaks.org/science/science-news/brain-study-finds-evidence-autism-involves-too-many-synapses. Accessed on May 16, 2017
Salynn Boyles, Autism Affects Child’s Entire Brain, http://www.webmd.com/brain/autism/news/20060816/autism-affects-childs-entire-brain#1. Accessed on May 16, 2017